Maandooriyaha, dhilleysiga, musuqmaasuqa booliska ... fadeexadaha caanka ah ee Kuuriyaanka waxay u jiheystaan ​​arrimaha gobolka - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Daroogada, dhilleysiga, musuqmaasuqa booliska ... Fadeexadaha caanka ah ee Kuuriya ayaa u jiheysta arrimaha gobolka
Waxaa lagu eedeeyay filimkiisa xiriirka galmada isaga oo aan haysan aqoonta lamaanayaashiisa isla markaana soo bandhigay cajaladaha, dhagxaanta Jung Joon-Young ayaa soo bandhigay warqad raali gelin ah. Waxaa sidoo kale lagu tuhunsan yahay in uu ka qaybqaatay shabakada foosha xumida ee xiddiga K-pop ee Seungri iyo in lagu dhiirrigeliyo kufsi dhowr ah oo dumar ah.
Waxay noqdeen kuwo soo noqnoqonaya waddanka oo dhan maalmo yar gudahood. Bilowgii bilood ee la soo dhaafay waxaa lagu bartilmaameedsanayay canshuur iyo ka ganacsiga maandooriyaha, fannaanka caanka ah ee Seungri ayaa horaantii todobaadkan lagu eedeeyay "dhiirigelinta dhilleysiga". Ka dib daabacaadda kanaalka telefishanka SBS Laga soo bilaabo kala-soocida ka yimid sheekooyinka khaaska ah, hadda waa saaxiibkiisa Jung Joon-da yar, hogaamiyaha koox dhagax ah, oo soo jiiday cadhada dadka reer Kuuriya. Xaaladda sii kordheysa, kiisku wuxuu sidoo kale muujin karaa kiisaska musuqmaasuq ee booliska dhexdiisa.
»Akhri ALSO - Waxaa lagu soo oogay tahriibinta iyo tahriibinta daroogada, xiddiga Seungri wuxuu ka baxayaa goobta K-pop
Jung Joon-da dhallinyarada ayaa ku dhawaaqay in uu u isticmaali doono "inta ka dhiman noloshiisa oo ka fakaraya sinada iyo sharci darada falalka". Instagram ayaa qabsatay sun4finger
"Waxaan qirayaa dhamaan dambiyadayda," ayuu yiri Jung Joon-yar oo warqad raali galin ah habeenkii salaasada. Waxaan filim dumay iyada oo aan ogolaanshahooda, waxaan wadaagay sawirada bakeeriga iyo intii aan sameeynayay, ma aanan dareemin dambi badan. "
sida laga soo xigtay SBSwadahadal kooxeed oo uu wadaagay caddaynta "kuhadlayasha" wuxuu ku jiray siddeed xubnood, oo ay ku jiraan seddex ragga farshaxan ah, oo ay ku jiraan Seungri iyo gujisaha FT Island ee kooxda Choi Jong-hun. "Sidii ay ahayd caadi, Jung Joon-yar wuxuu filim haween ah oo daaweeyay iyaga oo shay waliba ah," ayuu hadalkiisa ku daray SBS. Wuxuu ku farxay inuu si sharci darro ah u filayay, isagoo ogaaday dabiiciga dambiga falalka. Kadib markii la daabacay warqaddan raali galin, hay'adda Jung Joon-da ayaa ku dhawaaqday in ay jabiso qandaraaskiisa.
Marka la barbardhigo baaritaannada socda, warbaahinta Kuuriya waxay sii wadaan inay raadiyaan bisad tan oo taariikhda ka socota 2015 iyagoo raadinaya waxyaabo kale oo waxyeello u geysta. Mid ka mid ah qodobbada ugu dambeeya ee lagu soo bandhigay kanaalka, heesaha ayaa ku dhiirrigeliya xubnaha kale ee kooxda in ay "isku keenaan shabakadda, u tag kooxda nafta iyo kufsi [qof] baabuur". In kale, halka xubin ka ah "Kim" oo ka hadlaya galmo galmo kadib markii ay bixiso kaniiniga hurdada, Jawaabta Joon-da dhalinyarada: "Waa kufsi", oo ay ku xigto dhoolacad.
Shakiga xoogan ee musuqmaasuqa booliiska
Waxaa la waydiiyay Talaadada Raadiyaha CBSQareenka ayaa sheegay in booliska South Korea ay ku lug lahaayeen kiiska. Waxa uu doorbidayaa in uu qabsado Guddiga Xuquuqda Insaanka iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa si uu u ilaaliyo, ugu yaraan wakhti, aqoonsiga heesaha, macmiilkiisa. Iyadoo aan la sheegin magaca magacyada askarta bilayska ee musuqmaasuqa ah, wuxuu qirtay in uu ka mid yahay faylasha walxaha soo jeedinaya in dambiyada qaarkood ay ku kaceen xubno ka tirsan kooxdu ay ku dhufan lahaayeen lacagaha.
Musuq-maasuqa horay u badbaadiyay Jung Joon-da yar yar. In 2016 hore u jirtay, saaxiibkii hore ayaa dacwad ku soo oogay isaga oo u duubaya iyada oo aan iyada ogolaansho haysan inta lagu jiro falalka galmada. Bilayska ayaa markaa amar ku bixiyay telefoonka Jung Joon. Waxa la sheegay inuu ku dhawaaqay inuu "jabsaday" oo loo diray dayactir. Sida laga soo xigtay wargeysyada maraykanka Soompi oo ah sarkaal bilays ah oo la sheegay in uu ka codsaday shirkadda inay haystaan ​​moobilka si ay u caddeeyaan qoraalka aan macquul ahayn helitaanka xogta taleefanka. Shirkadda ayaa diiday. Baaritaanka bilayska ayaa la xidhay iyadoon sugin natiijooyinka falanqaynta, iyo Jung Joon-yar oo la sii daayay, ka dib markii ay ka baxday eedeymaha ay gabadha yar.
»Akhri ALSO - Gabadha Koonfur Kuuriya ayaa la soo baxday sawir gacmeed oo qarsoodi ah
Shirkii jaraa'id ee Talaadadii, Guddoomiyaha Booliska Qaranka ee Kuuriyada Kiiniya Min Gap Ryeong ayaa ballanqaaday in si adag loo hubiyo ka qayb qaadashada bilayska kiisaskan. "Haddii dembi lagu helo inta lagu jiro baaritaanka, si sax ah ayaa loo xukumayaa, iyada oo aan loo eegin xaaladda kuwa ku lug leh," ayuu yiri.
Geedkii haya kaynta
Kang Kyung-yun waa saxafiga ka dambeeya baaritaanka bilowga ee loo yaqaan 'Seungri'. Qabashada 'Video Mug' Youtube
Saxafiga SBSKang Kyung-yun, ayaa xusuusiyay in fadeexadaha Seungri iyo Jung Joon-yar-yar ay tahay in aysan marnaba xaalad khatar ah Waxyaabaha uu ka soo jeedo ee Sun Club, oo xiddigta K-pop Seungri ahaa agaasimaha xiriirka dadweynaha. "Khilaafka dhexe ee hareeraha qoraxda wuxuu ku saabsan yahay mawduuc aad u culus sida daroogada, isticmaalka kamaradaha qarsoon, xiriirka booliiska, iyo wixii la mid ah. Dabcan waa inaan sii wadnaa baaritaankeena. "
Waxa kale oo suurtagal ah in riwaayadan naxdinta ah ay soo bandhigto fara badan oo badanaa la iska indho-tiray oo ku saabsan suuqa madadaalada koonfurta Kuuriya. "Waxaan u maleynayaa in kiiskan caanka ah ee qarsoodi ah ee haweenku ay tahay dhibaato weyn oo la xidhiidha daawaynta dumarka ahaanshaha jinsiga, si loo fahmo khalkhalka galmada, natiijooyinka, iyo isticmaalka musuqmaasuq ee haweenka. warshadan, "ayuu yiri wariye baaritaan.
»Akhri ALSO - Sidee adduunka oo dhan u soo jiitaa dhaqanka Kuuriyaanka
Haddii jimicsiyada ay ku xiran tahay cadaadiska dadweynaha xoog leh oo waa inay ilaaliyaan muuqaal la ixtiraamo, waa sababtoo ah waxay matalayaan dhaqdhaqaaqa dhaqanka ee koonfurta Kuuriya. Dawladdu waxay si firfircoon u taageertaa sidii sheyga dhoofinta, taasoo sii xumaynaysa mugdiga naxdinta leh ee fadeexadda. Bilayska ayaa dhowaan ku dhawaaqay in Jung Joon-yare iyo Seungri lagu dhawaaqi doono isla maalintaas, Khamiista, Maarso 14.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.lefigaro.fr/musique/2019/03/13/03006-20190313ARTFIG00182-drogue-prostitution-corruption-de-la-police-les-scandales-des-stars-coreennes-virent-a-l-affaire-d-etat.php